UN kune G7: Kugadzirwa kwechengetedzo yakachengeteka yeCOVID-19 inofanirwa kupfuura purofiti
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hurumende Nhau » UN kune G7: Kugadzirwa kwechengetedzo yakachengeteka yeCOVID-19 inofanirwa kupfuura purofiti
African Tourism Bhodhi • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Health News • Kodzero Dzevanhu • Musangano Weindasitiri Nhau • nhau • vanhu • Kutarisirwa • ushanyi • Tourism Kutaura • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Kunyangwe paine kukurumidza kunoshamisa kugadzirwa kwemakemikari akachengeteka uye anoshanda eECVID-19, chiito chinokurumidza hachina kuteverwa kubatsira kuwanikwa kwakaenzana munyika dzese nematunhu.
Nyanzvi pfumbamwe dzakazvimirira dzakati yakwana nguva yekubatana pamwe nekubatana.
Mabhiriyoni evanhu muGlobal South vari kusiiwa kumashure.
Nyanzvi dzeUN dzakakurudzira makambani anogadzira mishonga kuti ajoine COVID-19 Technology Access Pool yeWHO.
"Munhu wese anekodzero yekuwana mushonga we COVID-19 wakachengeteka, unoshanda, nenguva uye zvichibva mukushandiswa kwesainzi yepamusoro yesainzi", nyanzvi dzakataura pamberi pemusangano wemazuva matatu weG7 boka rezvematongerwo enyika nyika dzinotungamira muUnited Kingdom, iyo inotanga neChishanu.
Hapana nguva yezvipingamupinyi
Nyanzvi pfumbamwe dzakazvimirira dzakati yakwana nguva ye "kubatana kwepasi pamwe nekubatana" kubatsira Hurumende dzese kubaya vanhu nekuchengetedza hupenyu.
"Haisi nguva yekutaurirana kwenguva yakareba kana yekumanikidza kumisikidza zvipingamupinyi kuitira kuchengetedza purofiti yemakambani", vakadaro.
“Mabhiriyoni evanhu muGlobal South vari kusiiwa kumashure. Vanoona majekiseni semushonga kana rombo rakanaka kune nyika dzakasimukira ", vakatsanangura nyanzvi, idzo, vakawedzera," dzinozoregedza dambudziko zvisina basa, kuwedzera zvakanyanya huwandu hwevakafa uye kudzamisa kushushikana kwezvehupfumi, pamwe zvichidyara mhirizhonga. "
Nyanzvi dzekodzero dzakatsigira chirevo chavo chegore rapfuura pamusoro pemitengo yevanhu padenda iri, vachiti panguva iyo mamirioni akatarisana nehurombo nenzara, vatungamiriri veG7 vanofanirwa kuzviisa pekutanga kuchengetedza hupenyu nehutano hwevanhu munharaunda dzakanyanya mamiriro ezveupfumi.
“Zvinokatyamadza kuti, sekureva kwa World Health Organization (WHO) mishumo, isingasvike muzana muzana yejekiseni rese rinopihwa kusvika pari zvino raenda kunyika dzinotambira mari shoma, ”vakadaro, vachisimbisa kuti kodzero dzenhumbi dzehungwaru hadzifanirwe kunge dzichitadzisa kugadzirwa kwemitengo yakaderera uye kuwedzerwa kwekuwaniswa.
Nyanzvi dzeUN dzakakurudzira makambani anogadzira mishonga kuti ajoine COVID-19 Technology Access Pool yeWHO (C-TAP) yekugovana ruzivo, data uye midziyo yehungwaru uye vakayeuka kuti nepo chibvumirano cheTrIPs pamusoro pekodzero dzezvehupfumi chinopa kumwe kuchinjika, kusanganisira mukana we kumanikidzwa kupihwa marezenisi mune zviitiko zvekukurumidzira kwenyika, hazvina kukwana kuti vapindure padenda razvino.
"Kuwedzeredza kugadzirwa kwemakemikari akachengeteka kunofanirwa kutora pekutanga pane kubatsirwa nedenda repasi rose", vakadaro. "Nyika dzinofanirwa kuona kuti kuchengetedzwa zviri pamutemo kwepfuma nemvumo hazvikoshese kodzero yemunhu wese yekuwana mushonga wakachengeteka, wakakodzera panguva uye unoshanda".
Nyanzvi dzakayeuchidza Nyika kuti dziwiriranise zviito zvavo neUnited Guiding Principles paBhizinesi neHuman Rights uye nekuona kuti masangano epasi rose, akadai seWorld Trade Organisation (WTO), “haadzori kugona kwenhengo dzeNyika kuti dziite basa ravo rekudzivirira kana zvinodzivisa mabhizinesi kuremekedza kodzero dzevanhu. ”
Kuwedzeredza kugadzirwa kwemajekiseni akachengeteka kunofanirwa kutora pekutanga pane kuita purofiti kubva padenda repasirese.